Ny fiainana tsara kokoa noho ny tena namana. - Anony - Quote Pedia
Ny fiainana tsara kokoa noho ny tena namana, ary marina izany! Na dia manana olona maro manodidina antsika aza isika, dia zara raha betsaka ireo olona izay manome lanja antsika ny tena heviny. Ilaina tokoa ny mahatakatra fa tsy ny rehetra no hanaiky anao tahaka ny maha ianao anao!
Tsara kokoa ny fiainana rehefa manana namana tena manodidina anao ianao, dia ireo izay mampanantena hijanona eo akaikinao amin'ny zava-tsarotra rehetra, ary manao izany tokoa izy ireo na eo aza ny sakana tsy maintsy lalovanao amin'ny fiainana.
Tsy milamina ny làlan'aina, feno fifamoivoizana izany fa rehefa manana olona tsara ianao eo anilanao, dia izy no antony hahatsapanao fa miova ho anao ny zavatra.
Aza hadino na oviana na oviana ny tena sakaizanao, ary ataovy azo antoka fa miaraka aminao foana izy ireo, satria hanome hery anao izy rehefa kivy. Ny tena namana dia mitaona antsika mandritry ny fotoana rehetra rehefa tsy mitoky amin'ny tenantsika isika.
Izy ireo no antony mahatonga antsika hivoatra ny angovo sy ny fientanentanana. Tsara kokoa ny fiainana ary raha tsy izany dia toa tsara kokoa isika rehefa manana olona lehibe tahaka izany isika.
Rehefa voahodidin'ny namana marina ianao, dia fantatrao fa manana farafaharatsiny ianao amin'ny faran'ny andro. Ny tena namana dia tsy ireo olona manampy anao ara-bola, fa ireo kosa no mijanona eo akaikinao na dia ny rivodoza mafy indrindra avy amin'ny oram-baratra aza avy aminao.
Izy ireo no olona tia anao noho ny maha-ianao anao ary manosika anao hanao tsaratsara kokoa isan'andro. Izy ireo no mino anao na dia mivadika aminao izao tontolo izao.
Ireo olona ireo dia mpiara-miasa aminao izay hahafahanao manao na inona na inona sy ny zava-drehetra, nefa tsy hikarakara zavatra hafa intsony. Tsara kokoa ny fiainana rehefa manana olona mahagaga toy izany ianao.
Fantatrao fa mijoro eo anilanao ireo olona ireo fa tsy hoe rehefa faly sy eo an-tampon'ny fahombiazanao ihany, fa ho eo koa izy ireo hanohana anao rehefa miatrika ny krizy.
Mihatsara ny fiainana rehefa fantatrao fa ireo fanahy tsara tarehy eo mba hitari-dàlana anao.
Mahatsiaro milamina tsara kokoa
Hard Times Mampiharihary Ny Tena Sakafo Quotes
Fitsangatsanganana miaraka amin'ny namana Quotes
Teny momba ny fisakaizana
Quotes Mba hahatonga anao hitsiky sy hahatsapa tsara kokoa
Fanamarihana sakaiza mahafinaritra
Quotes True Quotes
Teny tena nilaina
Teny fanentanana tena izy
Teny tena marina
Teny nalaina am-pirahalahiana
Tsy Andriamanitra hametraka anao eo amin'ny toerana izay tsy mahasolo anao. - Anonyme
Tsy Andriamanitra hametraka anao eo amin'ny toerana izay tsy mahasolo anao. - Teny nindramina tsy fantatra anarana:
Zavatra nianarako momba ny olona… Raha manao izany indray mandeha izy ireo dia hataony indray. - Anonyme
Zavatra nianarako momba ny olona… Raha manao izany indray mandeha izy ireo dia hataony indray. - Teny nindramina tsy fantatra anarana:
Rehefa mankasitraka izay anananao ianao dia mahazo valisoa bebe kokoa hatrany ianao. Miezaha hijanona ho tsara ary hihatsara ny raharaha. - Anonyme
Rehefa mankasitraka izay anananao ianao dia mahazo valisoa bebe kokoa hatrany ianao. Miezaha hanana toetra tsara…
Tsy maninona na oviana na oviana io, dia hihatsara kokoa. Ny toe-javatra sarotra dia manangana olona matanjaka amin'ny farany. - Anonyme
Misy laza malaza iray hoe rehefa miha-mafy ny toe-javatra, dia vao miha ny raharaha fotsiny. Raha ny marina, dia midika izany…